‘के गर्नुपथ्र्यो त राष्ट्रपतिले ?’ – हिमालयन ट्रिबुन
HT २०७७ जेष्ठ २८, बुधबार ०७:४३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको संस्थामाथिको भइरहेको प्रहारको निन्दा गरेका छन् । बुधबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरुले सोधेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति कार्यालयमा कार्पेट राख्ने प्रकरणमा भइरहेको विरोधप्रति आपत्ति जनाएका हुन् ।
उनले भने‘ प्रधानमन्त्री कार्यालयमा कहाँ राख्ने भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुन्छ ? राष्ट्रपतिले कहाँ कार्पेट राख्ने नराख्ने भन्ने विषय उहाँको हो र ? यो त गणतन्त्रमाथि प्रहार गर्ने काम भयो यसमा कसैले हौसिने काम नगरौं । चुपो लागेर बस्ने राष्ट्रपति चुपो लागेर बसेको छ । दुबो काटेर चौरी चिटिक्क पार्या छ अहिले कोरोनासँग लड्ने कि चौरी काटेर बस्ने भन्ने काम भएको छ । त्यसमा काम गर्ने दरबन्दी त कर्मचारीको छ नि ।’ उनले भने,‘के गर्नुपथ्र्यो त राष्ट्रपतिले ? यो त लोकतान्त्रिक पनि भएन र गणतान्त्रिक पनि भएन भन्ने भयो यसमा नबहकिऔं ।’
Spread the loveकाठमाडौँ । सरकारले जेठ १५ गते संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा पेस गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को बजेट प्रतिनिधिसभाबाट बहुमतले पारित भएको छ । प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकले बजेट पारित गरेको हो । प्रतिनिधिसभा बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले विनियोजन विधेयक पारित गरियोस् भनेर प्रस्तुत गरेका थिए । जसमा नेकपाका सांसदहरूले […]
२०७७ जेष्ठ १२, सोमबार ११:५०
राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओली LIVE